La Loma de las Guacamayas - sala # 1 - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguJosé Rodolfo
UJosé Rodolfo yi-Superhost
Igumbi elihle elinomnyango ohlukeneyo kunye negumbi lokuhlambela labucala, kwi-villa epholileyo, ehleli kwigadi ebukekayo ebiyelwe kwinduli ezolileyo, kumakhulu ambalwa eemitha ukusuka kwindlela edibanisa idolophu yasePalenque kunye namabhodlo ayo adumileyo.
I-oasis ezolile, eluhlaza ebekwe embindini wemizuzu nje ukusuka kuzo zombini idolophu yasePalenque kunye nePalenque National Park, kodwa ivakala ngathi ingena kwihlabathi elahlukileyo. Indlu eyilwe ngokukodwa iphakathi kwendawo enkulu, ebiyelweyo, ejikelezwe yingca enomhlaba kunye nezitiya ezinemithi yeziqhamo, ichibi elizaliswe ziintlanzi kunye nofudo, kunye nebala lentenetya. Inkitha yeentaka zakweleenjiko, kuquka iiscarlet macaw ezidumileyo ( guacamayas ) zisityelela rhoqo, yaye iqela leenkawu ezikhalayo lidla ngokudlula apho.
Uhambo olufutshane ukuya kwiibhari, iihotele ezinamachibi, imarike encinci kunye neeresityu ezibekwe ecaleni kwendlela phakathi kwePalenque kunye nePalenque National Park.
Imizuzu emi-2 ukuhamba ukuya kwindawo yokutyela yaseAlebrijes.
Imizuzu emi-2 ukuhamba ukuya kwiMini Super Balam.
7 imizuzu ukuhamba ukuya Cafe Fuga
Imizuzu eli-10 yokuhamba ukuya kwindawo yokutyela yaseMonte Verde
Ukuhamba ngemizuzu emi-3 / ukuhamba kwemizuzu engama-20 ukuya kwi-ADO / kwiziko lesixeko.
Imizuzu emi-5 ukuya e-El Panchan/ ekungeneni kwiPalenque National Park.
Imizuzu eyi-10 ukuya kumabhodlo.
Umbuki zindwendwe ngu- José Rodolfo
Iindwendwe ziya kudibana kwaye zinxibelelane noRodolfo, ohlala endlwini, ekufikeni kwakhe. Uya kukubonisa indawo yokupaka, igumbi lakho, kunye neegadi, kwaye uya kufumaneka ukuphendula imibuzo yakho kwaye anike iingcebiso kunye neengcebiso malunga nokonwabela ummandla ojikeleze iPalenque, kunye nokunceda ngayo nayiphi na enye into onokuyidinga. Uthetha iSpanish. U-Aviram ngumamkeli-zindwendwe, ofumaneka nge-imeyile okanye ngokuthumela imiyalezo ukunceda iindwendwe ezingezizo iSpanishi ngesiNgesi okanye ngesiHebhere.
Iindwendwe ziya kudibana kwaye zinxibelelane noRodolfo, ohlala endlwini, ekufikeni kwakhe. Uya kukubonisa indawo yokupaka, igumbi lakho, kunye neegadi, kwaye uya kufumaneka ukuphen…